inyanga egcwele cottage
Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, i-Brazil
Indawo yonke ibungazwe ngu-Julio
I-chalet ecashile e-São Gotardo - Flores da Cunha, ethokomele ukuze ujabulele izikhathi ezimnandi nalabo obathandayo.
Sinikezela ngebhulakufesi kuphela ngezimpelaviki.
Ngothando, u-Alice no-Julio bayalala bazinza kulesi sikhala esine-rustic.
Sawubona!!! Nalu ulwazi olubalulekile lokuhlala kwakho okuhle kakhulu!!!
• Ngokulandela indawo, lapho ungena epulazini, uzobona uphawu oluthi "YIMA", ophawini, khuphukela kwesokudla. Ukhiye usemnyango futhi uma uphuma ungawushiya emnyango nakhona.
• I-chalet iphelile, ine-wifi (ayikho iphasiwedi) kanye ne-smart TV. Iphinde ibe nelineni yokulala, izingubo zokulala namathawula okugeza.
•Ikhishi linezisekelo, amapani, uwoyela, usawoti, izinongo (ikhabethe lesithathu) njll., ihhavini likagesi, isiqandisi kanye nemicrowave.
• Uma udinga okuthile, imakethe noma igalaji likaphethiloli, okunconywayo ukuya e-São Gotardo noma e-Otávio Rocha, lapho benakho konke.
• Ezinye izindawo zokudlela zezimbali kanye ne-Gottardo ziletha ukulethwa ngocingo endaweni.
• Ukuze kusetshenziswe ubhavu, bane-valve yamanzi ashisayo nabandayo oyilawulayo ekushiseni okufunayo. Kunconywa ukuthi abantu ababili bagcwalise uhafu futhi bavule i-hydro kuphela ngemva kokuba amanzi esemboze izindawo zokuphuma kwamanzi, ukuze bangashi. Uma amanzi esepholile, chitha kancane bese ugcwalisa ngamanzi ashisayo. Sicela futhi ukuthi ungavuli i-hydro kanye neshawa ndawonye (indlu yasehlathini ingase iwe uma ukhiye =D). Sinikeza i-shampoo, i-conditioner, insipho negwebu.
• I-chalet ineziphuzo ezithengiswayo (iwayini, ubhiya, iwayini elicwebezelayo, isoda namanzi), kanye nokudla okulula nezinye izinto.
• Iziko liyi (salamander), ubasa umlilo omncane emnyango ongezansi, usebenzisa izigaxa, iphepha, nomlotha ngamafutha esizokwenza kutholakale, bese uphonsa izinkuni ezinkulu ngaphezulu.
• Sihlinzeka ngobhasikidi wezinkuni zokubasa ngosuku, futhi ungathenga enye ngama-R$20.00.
• Indawo yokuphuzela utshwala ine-cachacinhas, ngezilokotho zendlu yakwa-kkkk.
• Igedlela lezingulube liwumhlobiso nje, uma udinga ukushisa amanzi, sebenzisa elensimbi.
• Sinobambiswano oluhle no-Om Velas, umkhiqizi wasekhaya kanye nengcweti, obonisa imikhiqizo endlini ye-chalet, kanye nezintengo. Uma uzizwa uxhumekile ekuthengeni eyodwa, sazise futhi udlulisele inani ekupheleni kokuhlala kwakho, sinethemba lakho.
• I-cottage iyindawo yezikhathi ezimnandi, futhi njengawe, kuzoba nabanye kamuva, ngakho-ke siyakucela ukuba ujabulele futhi uphumule, kodwa uma kwenzeka okuthile okungalindelekile (ukuphuka noma ukuphuka) sicela usazise ukuze eyalandela akuyona yokulinyazwa.
• Jabulela ukuhlala kwakho!!!! Sisebenza kanzima ukukwamukela
• Asiyikhokhisi imali yokuhlanza inqobo nje uma kungekho ukungcola okweqile.
• Njengoba ngokuyinhloko kuyindawo yokuphumula, sicela ukuthi uma ulalela umculo, ungalaleli ngevolumu ephezulu ngemva kuka-10 ebusuku, futhi ukhetha umsindo we-ambient.
I-HDTV engu-32" ene- Disney+, I-Netflix
Hlola ezinye izinketho ezise- Flores da Cunha namaphethelo